काठमाडौं । आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमहरु छापा, रेडियो, टेलिभिजनपछि आएको पछिल्लो माध्याम अनलाइन संञ्चार जगतमा सबैभन्दा कान्छो विधा भए पनि यसको विकास, लोकप्रियता र क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यो निकै प्रभावकारी सञ्चार माध्यमका रुपमा विकास हुँदै आएको छ।
यसले सञ्चारका परम्परागत माध्यमका रुपमा चिनिने छापा, रेडियो र टेलिभिजनलाई पछिल्लो समयमा चुनौतीसमेत दिइसकेको छ ।
मल्टिमिडियाको रुपमा आएको अनलाइन पत्रकारिताले एकै ठाउँमा हेर्न, सुन्न र पढ्न सकिने भएपछि अन्य सञ्चारमाध्यामहरुको बजार खस्किदै गएको सुनिन्छ । हेर्ने, सुन्ने र पढ्ने सबै स्मार्ट फोनमै हुन थालेपछि रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको किनबेच समेत ह्वात्तै घटेको व्यवसायीहरुले बताउँछन् ।
अहिले परम्परागत मिडियाहरु अनलाइनमा निर्भर हुन थालिसकेको समेत देखिएको छ । परम्परागत सञ्चारका माध्यमको तुलनामा अनलाइन तीब्र रुपमा विकास समेत भइसकेको छ । सन् १९९० मा बेलायती वैज्ञानिक टीम वर्नर लीले वेवसाइटहरु बनाउनका लागि अत्यावश्यक एचटीएमएल कोडहरुको विकास गरी वेबपेजको निर्माण गरेको २ वर्षपछि मात्रै अनलाइनको सुरुवात भएको बताइन्छ ।
सन् १९९० मा अमेरिकाको शिकागो ट्रिव्यून अनलाइनका रुपमा आएपछि यसको प्रारम्भ भएको इतिहास छ । यसपछि सीएनएन, बीबीसीलगायतका अन्तर्राट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले अनलाइन संस्करण ल्याएका थिए । नेपालको सन्दर्भमा शुरुमा १९९५ देखि नेपालन्यूज डट कम सञ्चालनका आएको पाइन्छ ।
यी हुन् टप ५ अनलाइन समाचार पोर्टल
१. अनलाइनखबर डट कम
टप ५ अनलाइन समाचार पोर्टलमध्ये एक नम्बरमा अनलाइनखबर डट कम रहेको छ । अनलाइनखबर नेपालमा हेर्ने समाचार साइटमध्ये सबैभन्दा पहिलो स्थानमा छ । अनलाइनखबर डट विगत लामो समयदेखि सूचना, समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा अनलाइनखबरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा १२ लाख ४५ हजार लाइक रहेको छ ।
२. सेतोपाटी डट कम
त्यस्तै टप ५ अनलाइन समाचार पोर्टलमध्ये दोस्रो नम्बरमा सेतोपाटी डट कम रहेको छ । अनलाइन खबरभन्दा पछाडि सञ्चालनमा आएको सेतोपाटी डट कमले पनि निरन्तर समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । सेतोपाटी डट कम पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै आएको छ । सेतोपाटीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा १५ लाख ६० हजार लाइक रहेको छ ।
सेतोपाटी डट कम पछि नेपालका टप अनलाइन समाचार पोर्टलको तेस्रो नम्बरमा रातोपाटी डट कम पर्छ । केही वर्षअघि सञ्चालनमा आएको रातोपाटीले पनि निरन्तर समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । रातोपाटीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा ९ लाख ५० हजार लाइक रहेको छ ।
४. खबरहब डट कम
टप अनलाइन समाचार पोर्टलमध्ये पछिल्लो समयमा सञ्चालनमा आएको खबरहब डट कम चौथो नम्बरमा छ । छोटो समयमा लोकप्रियता कमाउन सफल खबरहब डट कमले समाचारमूलक सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ । खबरहबको आधिकारिक फेसबुक पेजमा १६ लाख ५४ हजार लाइक रहेको छ ।
५. दैनिक अनलाइन डट कम
नेपालका टप ५ अनलाइन समाचार पोर्टलमध्ये सबैभन्दा छोटो समयमा पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको अनलाइन हो दैनिक अनलाइन डट कम । सञ्चालनमा आएको साढे दुई महिनामै टप दैनिक अनलाइन यो स्थानमा आइपुगेको हो । पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै आएको दैनिक अनलाइन डट कमले निरन्तर समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । दैनिक अनलाइनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा ३० लाख लाइक रहेको छ ।
दैनिक भिजिटरका आधारमा अनलाइनको स्थान तलमाथि भइरहन्छ । कति जनाले अनलाइन खोले, समाचार कतिले पढे, डोमेन कतिले सर्च गरेर खोजे, कतिले लिंक शेयर गरे लगाएतका आधारमा अनलाइन पोर्टलको ¥यांकिङ निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालका टप ५ मा रहेका अनलाइन दैनिक करिब एक लाख ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मले हेर्ने गरेको पाइएको छ ।